अर्को भण्डारण कम्पनीले एक बसो बेचियो। किन उनीहरूले यसलाई यस समयमा बेच्न छनौट गरे? - YIC International International Co |तपाईंको इन्टरजेटेड सर्किट इलेक्ट्रॉनिक्स घटक आपूर्तिकर्ता |www।YIC-Electronics.com
घर > समाचार > अर्को भण्डारण कम्पनीले एक बसो बेचियो। किन उनीहरूले यसलाई यस समयमा बेच्न छनौट गरे?
अर्को भण्डारण कम्पनीले एक बसो बेचियो। किन उनीहरूले यसलाई यस समयमा बेच्न छनौट गरे?
20 20 को अन्तदेखि, संख्यात्मक स्रोतहरू फेला पार्न लगभग सबै चिपेटिक कम्पनीहरूले हतार गरिरहेका छन् र उत्पादन क्षमतालाई स्न्यापमा। केही कम्पनीहरूले आफ्नै fibs बेच्न छन्। उदाहरणका लागि, मार्च2On मा, ताइवान मिडियाले मेमोरी कम्पनी म्याक्रो सेलेन्क्सनलाई पुष्टि गरे कि यसले यसको GB-इन्च सेफर फेन्स बेच्नेछ।
Wu Minqui, म्याक्रोनबक्ताको अध्यक्षले प्रतिक्रिया दियो कि 6-इन्च सेफ फ्रान्स चलिरहेको छ, र उपकरण र बोट अलग गर्न सकिन्छ। यदि सबै ठीकठाक छ भने, यस वर्षको दोस्रो क्वाटरमा परिणाम हुनुपर्दछ। भनिन्छ कि त्यहाँ पहिले नै धेरै अभद्रहरू खरीदमा रुचि राख्दछन्।
म्याकेनक्रिप्ट अघि त्यहाँ एक प्रमुख भण्डारण कम्पनी माइक्रोन टेक्नोर पनि थियो, जसले 3D XPAPT परियोजनाको साँझमा, माइक्रोन टेक्नोड टु बन्द र बिक्री गर्दछ। XPOPP प्रविधिको आधारमा मेमोरी चिप्सको उत्पादन। स्रोतका अनुसार एडीआई, NXP, Stleroeroeybeedchics र infinon सम्भावित खरीददार हुन सक्छ।
अब त्यो सुरक्षित बजार यति तातो छ र उत्पादन क्षमता यति तातो छ, म्याक्रोनक्स र माइन किन आफ्नो fobs बेच्न को लागी छनौट?
म्याक्रोनाइक्स द्वारा प्रदान गरिएको विवरण हो कि हाल मुख्य रूपमा - इन्च र 12 इन्च उत्पादन लाइनहरूमा केन्द्रित हुन्छ, र 6-इन्च फ्याक्ट्रीको राजस्व योगदान छ, र नाफा उच्च छैन। यसबाहेक, म्याक्रोनलाइ मूल रूपमा 2020 को अन्त्यमा 6-इन्च कारखानामा अवकाश लिने योजना बनाइएको थियो, तर मार्च 2021 सम्म आधिकारिक रूपमा आधिकारिक रूपमा पुन: रोक्ने।
माइकनका कारणहरू पनि धेरै सीधा छन्। अन्य नयाँ प्रविधिहरूले राम्रो सम्भावना देखाएको छ, र थ्रीडी XPPAPP पर्याप्त व्यवसाय ल्याएको छैन। तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि टेक्नोलोजीको कुनै मूल्य हुँदैन। यसबाहेक, माइक्रोनल टेक्नोलोजीको अनुमान अनुसार, यूटा चिप ट्याप गरिएको कारखानाको वार्षिक खर्चको वार्षिक खर्च करीव 40000 मिलियन अमेरिकी डलर हो। यो सहि छ किनकि माइक्रोन यसको लागि यो अतिरिक्त खर्च तिर्न इच्छुक छैन, त्यसैले यो कारखाना बेच्न चाहन्छ।
अरू कारणले उनीहरूले भनेको थिएन। म डराउँछु अब राम्रो समय छ। उत्पादन क्षमताको सीमाको कारण अटोमोबाइलहरू, मोबाइल फोनको विकास, र केही औद्योगिक उद्योगलाई धेरै प्रभावित भएको छ, र चिप उत्पादन संसाधनहरू अहिले तातो छन्।
विभिन्न देशका सरकारहरूले पनि चिप उत्पादन उद्योगको विस्तारलाई समर्थन गर्न चिप उत्पादन उद्योगमा पनि ठूलो रकम लगानी गरिरहेका छन्। केही दिन अघि अमेरिका सरकारले अमेरिकी अर्धवान्द्रचालक उद्योगमा 500 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी पनि गर्ने छ। चीनले केही वर्ष अघि अर्धवार्ताको उद्योग उद्योगमा लगानी चलाउन थाले।
यस समयमा फेब बिक्री गर्दा बेच्न सजिलो छैन, तर राम्रो मूल्यमा पनि।
अवश्य पनि, कम्पनीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। औपचारिक जम्बकबाट यसको आफ्नै चिप्सको धारा उत्पादनमा, वास्तवमा धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ र धेरै लगानी। उदाहरण को लागी, माइन टेक्नोलोजीको युटा प्लान्टमा, केही विश्लेषकहरू अनुमान गर्दछन् कि यसको उपकरण प्रतिस्थापन लागत $ billion अर्ब रुपैयाँ हो। अवश्य पनि, यो किनभने माइक्रोनको कारखाना एक विशेष प्रकारको चिप उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ, र यो सजिलैसँग अर्को प्रकारको चिप उत्पादन गर्न संशोधन गर्न सकिदैन।
म्याक्रोनक्सिक्सको स्थिति राम्रो हुन सक्छ, तर म्याक्रोनक्सको नाफा उच्च हुँदैन, यदि कम्पनीले सोही उत्पादनमा उत्पादन गरिरहेको छ भने, त्यहाँ धेरै सुधार हुँदैन, र त्यहाँ एक मात्र तरिका अपग्रेड हुनेछैन। यद्यपि, उत्पादन क्षमता अपग्रेड र विस्तार गरेर, यसले वास्तविक सामूहिक मूल्यमा उपकरण खरीदबाट कम्तिमा दुई वर्ष लिनेछ। तसर्थ, छोटो अवधिमा, वर्तमान आपूर्ति स्थिति सुधार गर्न गाह्रो छ।